फोक्सुन्डोको नीलो सौन्दर्य :: Setopati
नीलो रङको ताल र अद्भुत सौन्दर्य
आफैमा सुन्दर कविताजस्तो, मनै हर्ने कलाजस्तो बिछट्ट राम्रो छ फोक्सुन्डो। यस्तोमा के चुप बस्न सक्थेँ त्यहाँ पुगेका कविहरू? पुगैकै दिन दिउँसो स्थानीय लोककलाकर्मीको सम्मानपछि दोस्रो चरणमा सुरु भयो कविता वाचन। तालको निलो पानी र कञ्चन पानीमा पालै पालो मिसियो काव्यध्वनि। कविता वाचनको लहरमा सुनिए भूपिन, हेमन, गनेस, हेमन्त, सागर र दीपेन्द्र।
अभयले रन्काए नेवारी गीत। हाम्रो यात्राटोलीका कलाकार कृष्ण पनि किन हात बाँधेर बस्थे? फोक्सुन्डो ताललाई त्यहीँ स्केच गरेर रङ र रेखामा देखाउन भ्याए। श्रव्यसँगै थपियो दृश्यकला। रौनक थपियो तालकिनारको मेहफिलमा।
फोक्सुन्डो नजिकै चिटिक्क परेको गाउँ छ, रिग्मो। ताल हेर्न र डोल्पा घुम्न आउने पर्यटकका लागि होटलहरूको सुविधा छ यहाँ। काठमाथि विछ्याइएका ढुङ्गा र ढुङ्गालाई माटोले छोपेका घरका छाना। पुरानै शैलीका घरहरू पनि देख्न सकिन्छ, स्थानीयता झल्किने। यही गाउँमा एक रात बस्यौँ हामी। केही गाउलेहरूसँग चिनाजान र कुराकानी पनि भयो।
कुराकानीकै क्रममा थाहा भयो, हरेक वर्षको ३ महिना रित्तो हुने रहेछ यो गाउँ। पुस, माघ र फागुनमा अत्यधिक हिउँ पर्ने हुँदा गाउँले डोल्पाकै तल्ला भूभागमा सरेर समय कटाउने रहेछन्। यही मौसमका लागि भनेर सबैका वैकल्पिक घरहरू बनेका रहेछन् तलतल। सबै गाउँले त्यतै सरेर बस्दा ३ महिना गाउँ नै चकमन्न। रिग्मोबासीले सुनाए, ‘जाडो याममा हिउँ नै हिउँले छोपिन्छ माथितिरका गाउँ, बस्नै सकिन्न।’
डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्म बल्लबल्ल जोडिएको छ सडकसञ्जाल। निकै विकट, निकै असुविधायुक्त छन् अझै डोल्पाका धैरै गाउँबस्ती। सामान ढुवानीको एक मात्र माध्यम खच्चड। बाटोमा ठाउँठाउँ भेट्यौँ हामीले खच्चडको लर्को। भिरालो र साँघुरो बाटोमा डरै लाग्ने। विपरीत दिशाबाट आएका खच्चडका बथानलाई बाटो छोड्न बटुवाहरू निकै सजग बनेको देखेँ।
खच्चड आएको सङ्केत पाउने बित्तिकै हत्तपत्त कुनापट्टि लेस्सिनुपर्ने रहेछ। त्यस्ता अप्ठेरामा आफू छेउतिर लागेर बाटो छोड्न थालियो भने छङ्गाछुर भिरबाट खसेर कता पुगिन्छ पत्तो नहोलाजस्तो। प्राचीन युगको कठिनाइको झल्को दिने यस्ता दृश्यहरू ठाउँठाउँमा देखेँ मैले। मनै कुँडियो। लाग्यो, समयसँगै हिँड्न कहिले सक्ला डोल्पाले?
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ४, २०७६